Ngosipụta abụghị otu ihe ahụ Mmetụta: Oge eruola ka ị kwụsị iji akara iji tụọ uru | Martech Zone
Kedu ihe bụ Mmetụta?
Mmetụta bụ ọnụọgụ nke anya anya na akụkọ gị ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi dabere na ndị na-agụ / ndị na-ekiri ụzọ mbata / isi iyi.
Na 2019, a na-achị ọchị banyere ọnụ ụlọ. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ mmetụta na ọtụtụ ijeri. Enwere ijeri mmadu asaa n ’uwa: ihe ruru ijeri 7 n’ime ha enweghị ọkụ eletrik, imirikiti ndị ọzọ achọghị ịma gbasara edemede gị. Y’oburu n’inwe ihe ruru ijeri abuo mana igha n’onu uzo gi ma odighi onye gha agwa gi ihe banyere edemede a, i nwere metric ugha. Ghara ikwu, ole n'ime mmekọrịta gị na ọha na eze bụ bots:
Bots gbara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% nke okporo ụzọ Internetntanetị niile na 2018.
Netwọk Distil, Akụkọ Bad Bot 2019
Chee echiche banyere akụkọ mkpesa gị kwa afọ dịka nkwekọrịta n'etiti nzukọ na ụlọ ọrụ PR ma ọ bụ n'etiti gị na onye isi gị-nke a bụ otu anyị ga-esi kọwaa ihe ịga nke ọma yana otu anyị si ekwenye iji tụọ ya. Nwekwara ike ị chọrọ ịnye echiche n'ihi na onye ahịa gị ma ọ bụ onye isi gị rịọrọ maka ha. Agbanyeghị, ihe aghụghọ bụ ime ihe abụọ:
Nye onodu na echiche ndị ahụ
Nye mgbakwunye metrik nke ahụ na-akọ akụkọ ka mma.
Mgbanwe maka usoro mmekọrịta ọha na eze nwere ike ịgụnye:
Onu ogugu ndu ma obu ntughari. Ihe ngosi gị nwere ike ịrị elu ruo nkeji iri na ise, mana ahịa gị ka dị larịị. Nke ahụ bụ n'ihi na ị nwere ike ọ gaghị ezubere ndị ziri ezi. Mara echiche nke ndu ole ị na - ewepụta.
Nnwale mmata: Iji ngwa dị ka Monkey Survey, mmadụ ole hụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ebumnuche gị na akụkọ ma mee ma ọ bụ gbanwee omume n'ihi ya?
Nchịkọta Googles: Chọọ maka spikes na ntanetị weebụ mgbe akụkọ gị gbara ọsọ. Ọ bụrụ n’isiokwu ahụ nwere backlink, chọpụta mmadụ ole n’ezie pịrị gaa na websaịtị gị site n’isiokwu ahụ ma hụ oge ha nọrọ ebe ahụ.
A / B ule. Kwupụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrịre ọhụụ site na mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta mana nye ha koodu nkwado dị iche iche iji chọpụta nke chụpụrụ ọtụtụ okporo ụzọ (mgbasa ozi ma ọ bụ mmekọrịta).
Nyocha ozi: Ole n’ime ozi gị bụ isi ka a gụnyere n’isiokwu ndị ahụ? Ogo karịa ọtụtụ ihe ka mkpa.
Tụlee nke a: ka a ga-asị na gị na ndị gị na ha na-asọmpi nọ n’ime ụlọ. Nwere ike na - eti mkpu karịa - mana ndị asọmpi gị dị jụụ na - eji PR na - eme ka ire ahịa, kwalite mmata, na mgbanwe ọkụ.
Ezigbo PR bụ maka iji usoro mgbasa ozi mee mgbanwe-na ịchọta usoro ziri ezi iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ.
Tags: ule uleMmatabots